अब सम्म, मोबाइल संचालक क्रिमीआ को क्षेत्र मा कार्य सबै रूपमा रूस भन्दा छैन। सायद यो प्रतिबंध को डर कारण छ, तर "बीलाईन", "मेघाफोन" र "Tele2" जस्ता सेवा प्रदायकको, को प्रायद्वीप भर काम छैन। यो आफ्नो सिम कार्ड किन्न वा रूसी संघ को अन्य क्षेत्रहरु मा ग्राहकहरु प्रस्तावित दर र सेवाहरू फाइदा लिन छैन असंभव छ। बित्तिकै यस्तो कार्ड को होल्डरलाई क्रिमीआ छ रूपमा, स्वचालित कारण जो संचार को लागत धेरै महत्त्वपूर्ण छ बढ्ने अंतर-नेटवर्क रोमिङ, जडान। तर यो सुरक्षित गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर? कसरी कुनै पनि अतिरिक्त लागत बिना Crimea मा एक रोमिङ जडान गर्न? तपाईं स्थानीय सहित अन्य संचालक, को सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रिमीआ इलाका आफ्नै प्रदायकहरू छ मा - "द वेभ", "K-टेलिकम" (उर्फ विन मोबाइल), "Sevmobayl" र "Krymtelekom"। यस मामला मा, "Sevmobayl" राम्रो विशेष Sevastopol र यसको सेरोफेरो भित्र काम गर्दछ। पनि Crimea मा वर्तमान र "टन", केही peculiarities संग हुनत। के रोज्ने?
Crimea मा "टन" रोमिङ
पहिले नै उल्लेख रूप मा, अपरेटर पूरै प्रायद्वीप भर संचालित। त्यसैले, हामी बस अवस्थित जडान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि एक स्थानीय सिम कार्ड किन्न। तपाईं साइट जडान गर्दा, सदस्य रूस भर थप लाभदायक यात्रा अनुमतिको निश्चित शुल्क अनुकूलन गर्न सक्षम हुनेछ।
अपरेटर को एक स्थानीय सिम कार्ड आकर्षक महसुल योजना को एक नम्बर प्रदान गर्दछ रूपमा "टन" Crimea मा रोमिङ, unprofitable प्रयोग गर्नुहोस्। क्षेत्र क्रिमीआ यो प्रदायक जडान - क्रास्नोडार क्षेत्र र Adygea गणतन्त्र। देश मा अरू सबैतिर जस्तै, हालै जो असीमित कल क्षेत्र भित्र "टन", इन्टरनेट ट्राफिक र एसएमएस को प्याकेटहरू एक निश्चित संख्या प्रस्ताव शुल्क "स्मार्ट", एक नम्बर छ।
Crimea मा शुल्क "टन"
फोन प्रयोग गर्नेहरूका लागि न्यूनतम, उपयुक्त महसुल योजना "स्मार्ट मिनी", जो 200 rubles खर्च हुनेछ। 1 जीबी इन्टरनेट यातायात, एक हजार मिनेट क्षेत्र बाहिर ती लगायत-नेट कल,, साथै स्थानीय सिम कार्ड "टन" 200 एसएमएस लागि: यो निम्न प्याकेज पनि समावेश छ। क्षेत्र भित्र, बाहिर नै 12 मिनेट खर्च हुनेछ, अन्य सिम कार्ड प्रदायकहरू मा कल प्रति मिनेट आधा rubles खर्च हुनेछ।
के तपाईं "टन" को ग्राहकहरु मात्र कल गर्न योजना भने, यो प्याकेजहरू "स्मार्ट" वा "स्मार्ट bezlimitische" संलग्न Inter-नेटवर्क सस्ता भनिएको लागि रोज्न गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। पहिलो प्रति महिना 350 rubles खर्च हुनेछ, र दोस्रो सदस्यता र पछि प्रयोगको लागि एक दिन 15 rubles को पहिलो महिनाको लागि प्रति दिन rubles एक सानो थप 12 भन्दा खर्च हुनेछ।
प्रतिस्थापन Crimea मा रोमिङ स्थानीय भाडा "अतिथि", एउटै महसुल को सिम कार्ड मा नि: शुल्क आगमन र बहिर्गमन कल मुछिएको मदत गर्नेछ। क्षेत्र भित्र, साथै रूस सारा लागि "टन" को सदस्यहरू कुनै पनि अन्य कल, प्रति मिनेट साढे एक rubles खर्च हुनेछ। तर, यो प्याकेजमा इन्टरनेट समावेश गरिएको छैन। यसलाई थप प्रति दिन 10 rubles खर्च र प्रदान इन्टरनेट ट्राफिक3जीबी हुनेछ जो नाम "Superboy स्मार्ट", अन्तर्गत सेवा सक्रिय गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
तपाईं Simcoe घर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने "टन"
तपाईं स्थानीय भाडा देखि सिम कार्ड खरिद गर्न निर्णय र Crimea मा रोमिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो कसरी महंगा खर्च हुनेछ?
तपाईं प्याकेजहरू "स्मार्ट" ( "मिनी" को लागि बाहेक) को एक जोडिएको छ भने, सेवा को बहुमत रूस सम्पूर्ण क्षेत्रमा समेट्छ। तर, तपाईंको खाता बाट रोमिङ एक दिन 15 rubles मा चार्ज गरिनेछ। प्याकेज भित्र कल निःशुल्क, साथै इन्टरनेट ट्राफिक हुनेछ। 3.80 rubles - कल परे प्याकेज गृह क्षेत्रमा2प्रति मिनेट rubles र रूस मा पाँच rubles, एसएमएस खर्च हुनेछ।
यो संग्रह सहित लगभग सबै शुल्क, मा उपलब्ध छ जो "जताततै मा घर" सेवा, जडान गर्न सम्भव पनि छ। अपवाद "वीआईपी-2014" र "व्यापार सीमा विहीन" को लागि योजना हो। सेवा को सक्रियता 30 rubles खर्च हुनेछ, र उपयोग एक दिन सात rubles खर्च हुनेछ। एकै समयमा रूस कल प्रति मिनेट तीन rubles खर्च हुनेछ र आगमन मुक्त हुनेछ। साथै, यो सेवा सदस्य सय एसएमएस निःशुल्क प्रदान गर्दछ।
"मेघाफोन" को सदस्यताका लागि
पहिले नै उल्लेख रूप मा, प्रायद्वीप मा कुनै स्थानीय महसुल "मेगाफन" छ। Crimea मा रोमिङ महँगो हुनेछ - प्रत्येक बहिर्गमन र आगमन मिनेट मेगाबाइट इन्टरनेट रूपमा साथै, दस rubles खर्च हुनेछ। एकै समयमा एसएमएस सन्देश बारे पाँच rubles खर्च हुनेछ। यस स्वायत्त गणतन्त्र को इलाका प्रवेश गर्दा यो रोमिङ स्वतः सक्रिय छ।
तथापि, तपाईं यो प्रदायक हो बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यस वर्ष एक विशेष विकल्प उपलब्ध "मेघाफोन" छ - "। Crimea मा रोमिङ" यो प्रति दिन 15 rubles को मासिक शुल्क समावेश छ। प्रति मिनेट पाँच rubles, इन्टरनेट - -5rubles को लागि megabyte, एसएमएस - तीन rubles यस मामला मा, सबै आगमन कलहरू मुक्त, बाहिर जाने खर्च हुनेछ।
"बीलाईन" को सदस्यताका लागि
को "बीलाईन" मा Crimea मा रोमिङ के कुरा, यो 2016 को गर्मी अन्तर्राष्ट्रिय छैन भनेर टिप्पण लायक छ। जो तपाईं आफ्नो घर क्षेत्र रोजेका छन् योजनामा कल र इन्टरनेट को लागत निर्भर हुनेछ। विशेष विकल्प र प्रस्ताव, क्रिमीआ को क्षेत्र मा अभिनय, यो प्रदायक उपलब्ध छैन।
त्यसैले यदि तपाईंको घर महसुल योजना - कुनै पनि लाभ तपाईं सबै हुनेछैन भनी "300 को सबै"। Crimea मा रोमिङ रूस अन्य सबै क्षेत्रहरु जस्तै बिल्कुल नै हुनेछ। स्वतः आगमन मा उपलब्ध हुन, र आगमन र बहिर्गमन वरिपरि दस rubles कल को लागत हुनेछ। एउटै रकम यो एसएमएस र मेगाबाइट इन्टरनेट पठाउन खर्च।
अधिक महंगा महसुल प्रयोग गर्दा "सबै 500" जडान थप लाभदायक हुनेछ। आगमन कल पहिलो मिनेट तीन rubles खर्च हुनेछ जब सबै अरूलाई मुक्त हुनेछ। बाहिर जाने कलहरू प्रति मिनेट तीन rubles, एसएमएस र 1MB इन्टरनेट पठाउन नै लागत मा बिल छन्।
केही अन्य महसुल योजना "बीलाईन" र पूर्ण निःशुल्क आगमन कल प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो प्रदायक विकल्प "मेरो देश" Crimea मा लोकप्रिय उपलब्ध छैन।
"Tele2" को सदस्यताका लागि
2016 देखि वर्तमान समय तपाईं प्रायद्वीप मा कि व्यावसायिक यस संचालक सिम कार्ड को लागि उपलब्ध छन् सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ "Tele2" मा Crimea मा कुनै पनि रोमिङ हुनुहुन्छ?
कम्पनी को आधिकारिक प्रतिनिधिको द्वारा बयान अनुसार, यस्तो जडान "खैरो" थियो। सम्म Crimea मा मध्य-अप्रिल 2014 उपलब्ध विकल्पहरू, रूस को सबै क्षेत्रहरु मा यात्रा गर्न बनाइएका थिए। हाल, विकल्प को एक विशेष प्याकेज "Tele2" थियो। Crimea मा रोमिङ अब 30 rubles को लागि जडान गर्न सम्भव छ, विकल्प को जारी प्रयोग प्रति दिन6rubles लायक हुनेछ। यस मामला मा, आगमन कल सधैं मुक्त हुनेछ, र अन्य सेवाहरू लागत घरेलू महसुल भित्र रहनेछ।
पनि उपलब्ध सबै कल प्रति मिनेट (आगमन र बहिर्गमन) पाँच rubles, यो खर्च मेगाबाइट इन्टरनेट नै रकम लागत जो अन्तर्गत आधारभूत महसुल छ। एसएमएस मूल्य 3.5 rubles छ।
Crimea मा YOTA
आज YOTA प्रयोग गरेर Crimea मा खर्च हुनेछ सबैभन्दा महंगा। आगमन कल को लागत र यो प्रदायक लागत9rubles, बाहिर जाने संग इन्टरनेट को 1 एमबी - प्रति मिनेट 19 rubles, एउटै नम्बर - एसएमएस पठाउनका लागि।
पहिले नै केही अवस्थामा, Crimea मा रोमिङ जडान गर्न, र एक स्थानीय सिम कार्ड किन्न थप लाभदायक उल्लेख गरे। यो सक्रिय इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि विशेष गरी साँचो हो।
सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता3जी र 4G सेवा स्थानीय ISP जीत मोबाइल मा उपस्थित छन्। "Sevmobayl" - साथै, गणतन्त्र को सम्पूर्ण क्षेत्रमा भन्दा3जी-जडान Sevastopol भित्र "Krymtelekomom" प्रतिनिधित्व छ। तपाईं रोमिङ जडान गर्दा सबै प्रदायकहरू माथिको संचालक मार्फत काम गर्न थाल्छन्।
यस कथनमा पर्यटकहरुका लागि डिजाइन एक विशेष महसुल योजना छ। को "समुद्र" जडान गरेर, तपाईं नि: शुल्क आगमन प्राप्त हुनेछ, बाहिर जाने नै प्रति मिनेट3rubles खर्च हुनेछ। इन्टरनेट को 100 एमबी 10 rubles खर्च हुनेछ।
15 rubles, प्लस एक समय तीन rubles एक दिन - केही शुल्क मा विकल्प "मेरो रूस", लागत जो जडान गर्न। एकै समयमा रूस कुनै पनि क्षेत्रमा बहिर्गमन कल प्रति मिनेट दुई rubles खर्च हुनेछ।
केवल इन्टरनेट महसुल योजना प्रयोग गर्न रुचि गर्नेहरूका लागि "छिटो र अति क्रुद्ध" पूर्ण फिट। यो सिर्फ 400 rubles वेब यातायात को 15 जीबी प्रदान गर्दछ।
यो प्रदायक Sevastopol लागि बाहेक, सबै प्रायद्वीप भन्दा आकर्षक योजना "मेरो क्रिमीआ", मान्य प्रदान गर्दछ। - नेटवर्क भित्र बहिर्गमन कलको लागि एक मिनेट, आधा रुबल को - मिनेट कल क्षेत्रमा पाँच rubles - मिनेट कल अन्य कुनै पनि रूसी क्षेत्रमा 20 सेन्ट: निम्नानुसार सेवाहरूको लागत छ। इन्टरनेट लागि 200 rubles ब्यान्डविथ 10 जीबी छ, अलग जडान गर्नुपर्छ।
यो प्रदायक मात्र Sevastopol काम गर्दछ र योजना "मेरो शहर" प्रदान गर्दछ। उहाँले जहाँ सदस्य क्षेत्र भित्र भाषणको 90 मिनेट, र-नेट कल र एसएमएस निःशुल्क प्रदान 180 rubles, मासिक शुल्क सुझाव। अन्य क्षेत्रहरु गर्न बाहिर जाने प्रति मिनेट तीन rubles खर्च हुनेछ। विकल्पहरू इन्टरनेट ट्राफिकको 10 जीबी 300 rubles खर्च हुनेछ, अलग जडान गर्न राम्रो पनि छ।
सेवा "लोकेटर" ( "मेघाफोन") जडान र प्रयोग। सेवा "मेगाफन" गर्न "लोकेटर" कसरी निष्क्रिय गर्न?
म एक मोबाइल फोन संग जहाँ व्यक्ति कसरी थाह।? "लोकेटर" - "बीलाईन" को सेवा। कसरी असक्षम वा सेवा "लोकेटर" सक्रिय?
"शून्य संक्रमण" को महसुल स्विच कसरी? शुल्क मोबाइल: समीक्षा
कार शरीर मरम्मत को सुविधाहरू
ताज महल कहाँ छ? आकर्षक प्रेम कथा
सिद्ध छाती। सपना वा वास्तविकता?
कसरी एक व्यक्ति ID र अन्य डाटा मा "सम्पर्क" मा फेला पार्न
कुपन कोड। आफ्नो फाइदा र बेफाइदा।
Andrey Kovalev: जीवनी, पेसा र परिवार
Adnexitis - उपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने गम्भीर रोग हो
PHP मा पाश लागि
आर्कटिक वृत्त के हो
चिकित्सा "Pilocarpine hydrochloride" - प्रभावकारी eyedrops